७०.५३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर ७०.५३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण
मुख्य खबर, लगानी 238 views
७०.५३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण
कम्पनीको आव ०७४/७५ को दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार रू. २७ करोड ९६ लाख नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा ८२ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. १५ करोड ३० लाख नाफा कमाएको थियो । कम्पनीको आम्दानी ७६ दशमलव १४ प्रतिशतले बढेकाले नाफा बढेको हो । सोही अवधिमा कम्पनीको चुक्तापूँजी ४२ प्रतिशतले बढेर रू. ३ अर्ब ९ करोडभन्दा बढी रहेको छ । कम्पनीले रिजर्भ कोषमा रू. ५ अर्ब २ करोड छुट्याएको छ भने बीमा कोषमा रू. ४५ अर्ब ६३ करोड जम्मा भएको छ । साथै कम्पनीले शेयरधनीहरुलाई ४२ प्रतिशत बोनस शेयर र प्रतिशेयर शेयर रू. २८ दशमलव ५३ का दरले नगद लाभांश(कर प्रयोजनको लागि) वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको फागुन १३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू. १७८४
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्यः रू. ४९९८
५२ हप्ताको न्यून व्यापार मूल्यः रू. १७१०
१८० दिनको भारित औसत मूल्यः रू. १८८४.४६
अध्यक्षः रमेश गुप्ता
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतः विवेक झा
स्टक स्टिकरः एनएलआइसी
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको चालू आवको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७३/७४ बीच तुलना गर्दाः
चुक्तापूँजीको तुलनमा खुद नाफा ७ दशमलव शून्य ६ बाट बढेर ९ दशमलव शून्य ३ पुगेको छ । कम्पनीको महाविपत्ति कोष जगेडा रकम रू. ३२ करोड ५३ लाख ७२ हजार रहेको छ ।
दोस्रो त्रैमासमा रू. ७ अर्ब १८ करोड ४ लाख बीमालेख धितोमा कर्जा उपलब्ध गराएको कम्पनीले रू. १८ अर्ब ५५ करोड ३८ लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
कम्पनीको चालू सम्पत्ति रू. ३० अर्ब ४० करोड २० लाख र चालू दायित्व रू. २ अर्ब ३६ करोड २७ लाख रहेको छ ।
कम्पनीले दोस्रो त्रैमासमा रू. ५१ करोड ६५ लाख आम्दानी गर्दा रू. २३ करोड ६८ लाख खर्च भएको छ ।
कम्पनीले हालसम्म रू. ५९ अर्ब ६० करोड बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ भने कुल कायम रहेको बीमालेखको सङ्ख्या १० लाख ८० हजार २ सय ६६ रहेको छ । १८ हजार ३ सय ६८ जनालाई रू. २ अर्ब ३५ करोड २४ लाख दाबी भुक्तानी गरेको छ । भुक्तानी हुन बाँकी रकम रू. ८३ करोड ५४ लाख रहेको छ ।
कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. १८ दशमलव शून्य ६, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू. १ हजार ७ सय ४७ मूल्य आम्दानी अनुपात ९८ दशमलव ८७ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २ सय ७२ दशमलव ९३ रहेको छ । सोमवारको शेयर मूल्य प्रतिशेयर नेटवर्थको ८ गुणा छ ।
कम्पनीको प्राविधिक विश्लेषणः
विक्री चापः कम्पनीको सोमवार भएको शेयर कारोबारमा खरीद चापको तुलनामा विक्री चाप साढे १ गुणा बढी रहेको छ । सो समयमा १० हजार ३ सय ७७ कित्ता शेयर विक्री र ५ हजार ९ सय ६० कित्ता शेयर खरीद गर्ने माग गरेको थियो ।
सोमवार भएको शेयर कारोबारको विवरण
२७ नोभेम्बर २०१७ २६ फेब्रअरी २०१८
मैनबत्ती विश्लेषणः बैङ्ककोे ५७ दिनको कारोबारमा अन्तिम दिन ह्याम्मर आकृती बनेको छ । यस आकृतीले शेयर मूल्य बुलिशमा जाने सङ्केत देखाँउछ ।
आरएसआईः बैङ्कको ५७ दिनको कारोबारमा आरएसआई न्यूट्रल जोन (४९ दशमलव ३७ स्केल)मा छ । यसले शेयर खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशनः कम्पनीको ५७ दिन भित्रको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन ८ दशमलव १३ विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको छ ।
मुभिङ एभरेजः कम्पनीको ५७ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य १४ दिने र २६ दिने औसत मूल्यरेखाभन्दा माथि छ । यदि सोमवारको मूल्य रू. १ हजार ७ सय ८४ बाट बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिएमा रू. १ हजार ८ सय २४ मा प्रतिरोध पाउन सक्छ भने मूल्य सस्तिएमा रू. १ हजार ७ सय ६३ मा टेवा पाउन सक्छ ।